Mandràra Amin’ny Fomba Ofisialy Ireo VPN Tsy Nahazo Alàlana i Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Febroary 2017 6:50 GMT
Vakio amin'ny teny English, Swahili, bahasa Indonesia, Español, English
Toy izao ny vakin'ny fanambarana iray tamin'ny 17 Janoary ao amin'ny vohikalan'ny Ministera:
Araka ny Lalàna Momba ny Fitantanana ny Anaran-tSehatra Aterineto nohavaozina, ny vohikala rehetra miantrano any Shina dia tsy maintsy manoratra ny anaran'ny sehatr'izy ireo, miaraka amin'ireo mpamatsy tolotra ho an'ny anaran-tsehatra izay nahazo alalana ao anatiny mba hahazo alalana hiditra amin'ny tambajotra Shinoa. Izay orinasa tsy manao izany dia tsy ho tafiditra tsotra izao amin'ny tambajotra anatiny ao Shina.
Mazava loatra, ampiharina amin'ny “VPN tsy manara-dalàna” irery ilay fitsipika –tsy ho foana tanteraka ilay teknolojia. Ohatra, mbola ho afaka hampiasa VNP mba hanapariahana fampielezakevitra politika ivelan'ny Rindrin'ny Aroafo lehibe ihany ny tafiky ny kolontsaina any Shina.
Niditra an-tsehatra amin'ny fifehezana ny VPN ny MIIT, inona no ho fiantraikany amin'ireo vondrona an-tserasera? Tamin'ny taona lasa, ny 20 Janoary [taorian'ny nandresen'i Tsai Ing-wen tamin'ny fifidianana filoham-pirenena Taiwan], an-tapitrisany ny tanora nihanika ny manda mba hanatanteraka fitiavan-tanindrazana. Miaraka amin'ny fanohanana ny fikambananà antoko, afaka manao zavatra amim-pahasahiana izy ireo. Iza no aoriantsika? ny mpitarika dia … Ny Filoha Mao!